राजनैतिक रुपमा पुर्वाग्रही नभई जनता विच गरेका वाचाहरु ईमान्दारीपूर्वक पुरा गर्छु – eSajha News
राजनैतिक रुपमा पुर्वाग्रही नभई जनता विच गरेका वाचाहरु ईमान्दारीपूर्वक पुरा गर्छु नगरप्रमुख : डिल्लीराज भुषाल
प्रकाशित मिति: १७ भाद्र २०७५, आईतवार १९:१६
रेसुङ्गा नगरपालीका प्रदेश नं ५ अन्र्तगत गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाममा अवस्थीत धार्मिक, पर्यटकीय, तथा ऐतहासीक महत्व वोकेको सुन्दर नगरपालिका हो । यस नगरपालिकामा प्रथम निर्वाचित नगर प्रमुख डिल्लीराज भुषाल लोकप्रिय नेताको रुपमा परिचित हुनु हुन्छ ।
नगर रेसुङ्गा नगरपालिकाको प्रथम निर्वाचित नगर प्रमुख भुषालको जन्म वि.स. २०१० मा बुवा चिन्तामणी भुषाल तथा आमा निमकला भुषालको कोखबाट अर्घाखाँचीको तत्कालीन मरेङ्ग गाँउ विकास समितिमा भएको हो । उहांले मध्यम परिवारमा सदस्यको रुपमा बाल्यकाल, तथा राजनैतिक यात्रा शुरु गर्नु भएको छ । लामो समय विभिन्न व्यापार व्यवसाय तथा विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा आवद्ध नगर प्रमुख भुषाल २०३६/०३७ साल देखी राजनीतीमा सक्रिय रहनु भएको हो । विक्रम सम्वत् २०४८ साल देखी तत्कालीन ने.क.पा. ए.मा.ले बाट संगठित रुपमा राजैनीतीक यात्रा उहांले शुरु गर्नु भएको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा तत्कालीन ने.क.पा.एमालेका तर्फ उहां रेसुङ्गा नगरपालिकाको नगर प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनु भएको हो । नगरप्रमुख भुषालसँग साझा न्यूज गुल्मी प्रतिनीधी भानु मरासिनी सँग समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीका केही अंशहरु :
◊ नगर प्रमुख पदमा विजयी भइ कार्यभार सम्हालेको १ बर्ष वित्यो, आफ्नो काम प्रगति बाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनु हुन्छ ?
हो म नगर प्रमुखभएको १ बर्ष भइसक्यो, हुन त म मेरो कार्य प्रगति बाट सन्तुष्ट छु भन्नै पर्ला तर मैले देखेको रेसुङ्गा नगरपालिका, मैले परिकल्पना गरेको नगरपालिका बनाउन अझै समय लाग्छ । बनि सकेको छैन, म अझै सन्तुष्ट बन्ने समय आएको छैन मलाइ सम्पूर्ण पक्षबाट अपेक्षित सहयोग मिलेको पनि छ । अझ बढी मिल्यो भने र मेरो टिमले साथ र सहयोग दियो भने म, हामी, सवै यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिबाट सन्तुष्ट बन्ने समय छिटै आउछ ।
◊ यहाँको नेतृत्वमा के कति विकास निमार्णका कार्यहरु सम्पन्न भए–हुदैछन् ?
मुलत यो पहाडी जिल्ला समग्र विकासका पक्षबाट पछाडी भएको सर्व विदितै छ । पूर्वाधारको प्रयाप्त विकाश नभएको यो नगरपालिकामा काम गर्न निकै सर्घष गर्नु परेको छ । यात्रा सजिलो छैन । तर पनि म नगरको नेतृत्वमा आई सके पछि शुरुमा त कर्मचारी व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गर्यौं । वडा कार्यालय व्यवस्थापन, नगर भित्रको प्रशासनिक गतिविधिलाई गतिशिलता प्रदान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जि.स.स.लगायतका कार्यालयसंग समन्वय गरेको छु । वडा कार्यालयबाटै वडा वासीलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न विद्युतीय सेवा समेत सञ्चालन गरेका छौ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु वितरण लाई व्यवस्थित गर्न वैकिङ प्राणली मार्फत घर दैलोमा सेवा प्रवाह गरेका छौ । नगरको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, खानेपानी सम्स्यालाई सदाका लागि अन्तय गर्न राष्ट्रिय योजना ल्याउन सफल भयौ । त्यस सम्वन्धी कार्य अगाडी वढी रहेको छ । नगरपालिकालाई हवाई मार्ग संग जोड्ने नयां अध्याय शुरु गरी परिक्षण उडान समेत सम्पन्न भईसकेको र नियमित उडानका लागि प्रक्रिया अगाडी वढाएका छौ । सडकको निकै दुरावस्था थियो यसलाई पुन निमार्ण गर्ने कार्य पनि केही सम्पन्न भई सकेको छ ।
ढल निकासको दिगो व्यवस्थापन सहित योजना अगाडि बढाएका छौ । त्यसका अलावा, नगर क्षेत्रमा खेलकुदको विकासका लागि नगर क्षेत्र भित्र रहेको पुरानो खेल मैदान चिदी चौर लाई स्तर उन्नति गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौ । अझ महत्वपुर्ण कुरा त यो नगरको भौतिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यातायात, पर्यटन लगायतका सरोकारका विषय सम्वन्धी दिर्घकालीन निती तथा योजना बनाई आधुनिक सहरीकरण सहित यसको दिगो विकासको खाका कार्यान्वयनको चरणमा हो । बितेको १ वर्षमा नगर सञ्चालन सम्बन्धी विभीन्न कानून, कार्याविधी तथा नियमावली निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागी धेरै समय खर्चिनु परेको छ ।
◊ नगर क्षेत्र भित्रको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न आज सम्म यहाको योगदान के–कस्तो रह्यो ?
यहाँको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न, नगर क्षेत्र भित्र संचालित सरकारी तथा निजि विद्यालयमा अध्यापनरत विभिन्न विषयका विषय शिक्षकहरुलाई विशेष गरी मा.वि तहका अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक आदि विषयका शिक्षकलाई सम्वन्धित विषयका विषय विशेषज्ञ मगाई ५÷५ दिने क्षमता अभिवृद्धि तथा पुर्नताजगी तालिम प्रदान गर्यौं । यसै गरी कक्षा ८ को रिजल्ट कतिपय विद्यालयमा निकै लाजमर्दो देखियो । त्यस पछी हामीले उक्त तहमा पढाउने विषय शिक्षकहरुलाई तालिम कार्यक्रम पनि संचालन गर्याै भने गुणस्तर सुधारका निम्ती सम्वन्धित विद्यालयका प्र.अ., अध्यक्ष सम्वन्धित विद्यालय हेर्ने वि.नि. एवं स्रोत व्यत्ति सहित संयुक्त छलफल, परार्मश गरी नया र्शैक्षिक कार्य योजना निमार्ण गरी लागु गरेका छौ । आशा छ, अव शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउंछ । हाम्रा शिक्षक साथीहरु निकै मेहनतका साथ लागी पर्नु भएको पनि छ । अब म हाम्रो नगर क्षेत्रमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने कुरामा निकै आशावादी पनि छु । नगर क्षेत्रका केही विद्यालयहरु ५ नं प्रदेशमै उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल पनि छन् । जस्तो रेसुङ्गा मा.वि., सिद्धवावा, महेन्द्र मा.वि. यी विद्यालयहरुको अनुकरण अरु विद्यालयहरुले गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसका अलावा जिल्लाकै एक मात्र क्याम्पस लाईृ आंगीक वनाउन सफल भएका छौ ।
◊ नगर प्रमुख ज्यू, वर्षायाममा पनी नगरवासीले पेट भरी स्वच्छ पानी खान पाईएन भनेर आलोचना गरी रहेका छन् । तपाँईका नगरवासीहरु स्वस्थ खानेपानी, विद्युत, सडक जस्ता आधारभुत सेवा सुविधा सम्पन्न कहिले बन्नलान ?
अँ, त्यो यस्तो छ, हाम्रो नगरपालीका क्षेत्र भित्र बिशेष गरी बजार क्षेत्रमा लगायत १४ वटै वडामा खानेपानीको समस्या देखीयकै छ । हाल सञ्चालनमा रहेका खानेपानी योजनाले अहिलेको मागलाई पुरा गर्न सकेको छैन । त्यसको दिर्घकालीन व्यवस्थापनका लागी मज्याङ्ग खानेपानी योजना लाई राष्ट्ीय योजना अन्तरगत अगाडी बढाई सकेका छौ । अबको २ वर्ष भित्रमा हाम्रा चौध वटै वडामा लिफ्टीङ्ग प्रणाली बाट खानेपानी सेवा विस्तार हुने छ । जहाँतक सडक अनि विद्युतको कुरा छ हामि नगरपालीका भित्रका मुख्य मार्गहरु र अधिकांश शाखा बाटा हरु अबको डेढ वर्ष भित्र पिच गरी सक्ने योजना अनुरुप काम अगाडी बढाएका छौ । विद्युतको समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएपनी अझै केही समस्या हरु रहेका छन् जस्तो भौगीलीक कारणले वर्षायाममा विद्युतका पोलहरुमा समस्या उत्पन्न भई विद्युत आपुर्ति अनियमीत हुने, लो भोल्टेजका समस्या लगायतका केही समम्याहरु अझै पनी नगरवासीहरुले झेलीरहनु भएको छ । यावत् समस्याहरुको उचित समाधान हुने गरी नगरपालीकाले काम अगाडी बढाइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । खानेपानिको समस्या पुर्ण रुपमा निर्मुल हुन केही समय लाग्छ । तत्कालका लागी हामी मौजुदा श्रोतको व्यवस्थीत वितरणमा ध्यान दिन्छौ ।
◊ हुन त यो नगरपालीका भित्रै जिल्लाकै ठुलो अस्पताल तथा अन्य प्राईभेट अस्पताल तथा स्वास्थ संस्था सञ्चालनमा छन्, तर पनि सेवा प्रवाहभने निकै टिठलाग्दो देखीन्छ, जसले गर्दा सामान्य उपचारका लागी पनी आम नागरीक हरु छिमेकी जिल्लाहरु तथा काठमान्डौ धाउनु पर्ने अवस्था छ । स्वास्थ सेवा सुधारका लागी यहाँका योजनाहरु के कस्ता रहेका छन् ?
यही नगरपालीकामै जिल्लाकै पुरानो र ठुलो अस्पताल तम्घास अस्पताल लगायतका अन्य स्वास्थ संस्थाहरु पनि छन् तर तपाइले भने जस्तै सेवा प्रवाह र सेवाको गुणस्तर निकै कमजोर छ । त्यसको भरपर्दो र स्थाई व्यवस्थापन गर्न हामी यहाँका स्वास्थ क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारी हरु सँग परामर्श गरी रहेका छौ, उहाँहरु सँग यो विषयमा पटक पटक बहष पनी गरेका छौ । अस्पतालको भौतीक संरचना, फोहर व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, नविनतम प्रविधी, विशेषज्ञ सेवा आदीको व्यवस्थापनमा हाम्रो ध्यान गएको छ । हामी योजनावद्ध रुपमा यसको सुधार र स्तरोन्नतीमा लागेका छौ । हाम्रो कार्यकाल अवधि भित्र जिल्लामै उत्कृष्ट प्रसुती सेवा सहित अधिकांश रोगहरुको निदान र उपचार विशेषज्ञ डाक्टरहरुबाट सञ्चालन गर्ने योजना अगाडी सारेका छौ । प्रत्येक वडामा सुबीधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको छ । हामी सकेसम्म यस तम्घास अस्पताललाई स्तर उन्नति र उचित व्यवस्थापन गरी धेरै भन्दा धेरै रोगको उपचार सम्भव हुने अवस्थामा यस अस्पताल लाई पु¥याउने लक्ष्यका साथ अगाडी बढेका छौं ।
◊ जनप्रतीनीधीहरु राजनैतीक रुपमा बढी पूर्वाग्रही भएको जन गुनासो व्याप्त रहेको छ, त्यती मात्र होइन जनप्रतीनीधीहरु बढी सुविधाभोगी भएको, जनसरोकारका विषयवस्तु हरु संबोधन गर्न नसकेको आरोप छ नि ?
सुबिधाको हकमा हामी यो नगरपालीकाका कुनै पनी जन प्रतिनीधीहरुले कुनै किसिमको आर्थिक लाभ लिएका छैनौं । म आफूले अहिले सम्म नगरपालीकाको कोषबाट रु. १०० पनी खर्च गरेको छैन । तपाईले नगरपालीकाका लेखा कर्मचारीबाट यसको बारेमा बुझ्न सक्नु हुन्छ । हामीले नगरपालीकाको पुरानै गाडी प्रयोग गरेका छौं । बरु हामी आफ्ना निजी गाडीहरु प्रयोग गरेरै नगरपालीका काममा खटेका छौ । हामी जनताालाई आर्थिक भार थप्न आएका कदापी होईनौं । नेपालका ७ सय ५३ स्थानीय निकाय मध्ये मलाई लाग्दछ हाम्रो नगरपालिका मात्रै यउटा यस्तो नगरपालिका हो जहाँ जनप्रतीनीधीहरुले आज सम्म कुनै किसीमको आर्थिक सेवा सुविधा लिनु भएको छैन । आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमा हामी सबै प्रतिनीधी हरु सचेत छौ । दोश्रो कुरा, राजनैतीक रुपमा पुर्वाग्रही भन्नुभयो, म आफु हिजो निर्वाचित हुंदा कुनै एउटा दलको सहयोग र समर्थनमा नगर प्रमुख भएता पनि म अब म एमालेको मात्रै नगर प्रमुख होईन । मलाई गलत ढंगले परिभाषित नगर्न अनुरोध गर्दछु । म डिल्लीराज भुषाल रेसुङ्गा नगरपालीकाको सेवक मात्र हुँ । आस्था र सम्बन्ध एक ठाँउमा होला तर म बाट कसैलाई जाना जान राजनैतिक रुपमा आफ्नो र परको व्यवहार गरेको छैन । अञ्जान वा भुलवश त्यस्तो कसैमा पर्न गएको रहेछ भने त्यसका लागी क्षमा याचना गर्दछु ।
◊ चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा यहाँले गरेका प्रतिवद्धता कति पुरा भए कति र हुदै छन् ?
हैन, एकै वर्षमा सवै कुरो खोजेर त मैले कहाँवाट दिने हो र । तर मेरो कार्यकालमा मैले गरेका सवै प्रतिवद्धता पुरा हुन्छन् । ढुक्क हुनुुस् ।
◊ ति सवै प्रतिवद्धता मध्ये आम सर्वसाधारणको स्मरणमा तपाईका २ वटा प्रतिवद्धतामा अव गरीवहरु खरको छानामुनि वस्नु पर्दैन, मेरो नगरपालिका भित्रका अति विपन्न परिवारका वच्चा वच्चीलाई निशुल्क शिक्षाको कुरा पनि भन्नु भएको थियो, सम्झीनु भा छ ?
एकदम सम्झेको छु । आफुले गरेको प्रतिवद्धता म विर्सिदैन । अव छिट्टै खरका छाना हटाउछौ, त्यसका लागि योजना बनि सकेको छ । वाल वालिकाको शिक्षाको कुरो चाहि यसो छ, मैले राज्यबाट एक रुपैया लिन्न घर लादैन । राज्यलाई पनि छाड्दीन, भन्नाले मैले पाउने आर्थिक सेवा सुविधा गरिव, दलित र असहाय वालवालिकाको शैक्षिक विकासमा खर्च गर्ने योजना वनाएको छु । अव त्यो चाडै कार्यान्वयनमा आउछ ।
◊ यस नगरपालिकाको सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक विकासका निम्ती यहाँ र यहाँको नेतृत्वको टिमले के कस्ता निती तथा योजना अघि सार्नुभएको छ?
गत वर्ष हामी नितान्तै नयाँ थियौँ, अन्यौल मै प¥यौ । यसवर्ष सवै वडामा समानुपातिक हिसावले वजेट विनीयोजन गरेका छौ । स–साना रकमका योजना सम्पन्न गरेका छौ । साना किसिमका योजनाहरु अव वडा वाटै संचालन र सम्पन्न गर्ने परिपाटी अंगाल्दै छौ । लगभग ८५ प्रतिशत निशर्त र ९५ प्रतिशत शशर्त वजेट खर्च गरी सम्पन्न गरेका छौ । अहिले केही वजेट वडामा पनि पठाएका छौ । अहिलेको वजेट हाम्रो नगरले २० करोड शशर्त र १६ करोड निशर्त गरी ३६ करोड वजेट प्राप्त गरेको छ । १६ करोड भित्रको वजेट मध्ये संचालित योजनाहरु सम्पन्न गर्न झण्डै साढे १० करोड खर्च हुने अनुमान छ । नगर तथा वडा कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागी प्रशासनिक खर्च तथा तलब भत्तामा ६ करोड खर्च हुने अनुमान गरीएको छ ।
◊ थोरै प्रसंग वद्लौ, पछिल्लो समयमा राज्यका विभिन्न निकायको विचमा शक्ति, अधिकार, स्वामित्व आदी विषयले जन प्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पारिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । तपाईको अनुभव कस्तो छ?
स्थानिय स्तरमा शासन प्रशासन संचालन गर्न अहिले एक प्रकारको जटीलता त छ, अझै केन्द्रले नै सवै कानुन र निती नवनाई सकेको अवस्थामा सहजता छैन । हामी पूर्ण रुपमा कानुनको उपयोग गर्न पाउने, आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न पाउने दिनको पर्खाइमा छौ । संविधान प्रदत अधिकारको उपयोग अझै गर्न पाएका छैनौ । सिंहदरवार गाँउमा अझै आई पुगेन, ढिलो भएको छ । कानुनी र प्रकृयागत जटीलता हरुमा अझै सुधार आउन सकेको छैन ।
◊ कर्मचारीको पक्षवाट कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ? कतिको सहयोगी हुनुहुन्छ ?
कर्मचारी मित्रहरुवाट म, हामी सन्तुष्ट छौ । अव १५ ÷ २० वर्ष देखि जन प्रतिनिधी विहीन हाम्रा स्थानिय निकायहरु सम्हालेर आउनुभएका कर्मचारी मित्रहरु हुनुहुन्छ । केही, कोही व्यक्ति विशेषका अपवाद वाहेक कर्मचारीतन्त्रवाट असहयोग छैन । हामीलाई प्रशासनिक गतिविधी संचालन गर्न मार्ग दर्शन गर्नुभएकै छ । कुनै असन्तोष छैन ।
◊ तपाईको नगरमा प्रतिपक्षको भुमिका कस्तो महसुस गर्नु भएको छ नी ?
प्रतिपक्षको भुमिका ठिकै छ, नगरको विकासमा विरोध र अवरोध गरेर मेरो नगर मात्र विग्रदैन वहाँहरुको पनि त नगर हो । एक दुई दिन खच पच त भइहाल्छ । तर मैले वहाँहरुको अभिमतको कदर गर्ने काममा चुकेको छैन । अहीले सम्म समझदारीमा आउनु भएकै छ । प्रतिपक्षको धर्म राम्रोसँग निभाउनु भा छ । काम रोकेर ठप्प पार्ने, योजना नै रोक्ने जस्ता घृणित व्यवहार देखाउनु भएको छैन । हामी वरावरी जवाफदेही वन्नु पर्छ ।
◊ पछिल्लो समयमा राज्यले नाना थरी कर थोपरेर आम सर्वसाधारण मानिसलाई आर्थिक भार थपेको आरोप छ भने अर्कोतिर कतिपय जनप्रतिनिधीहरुको महंगा गाडी चढ्ने र विदेश भ्रमणमा तछाड मछाड गर्ने होडनै चलेको छ । २० – २५ करोड मुस्कीलले वजेट पाएका हाम्रा गा.पा का र न.पा का अध्यक्षहरुको यो प्रवृति प्रति तपाईको धारणा के छ ?
म त भन्छु, यो महापाप हो, जनताले हामीलाई सुविधाभोगी वन्न पठाएका होइनन् । हामी काम गर्न आएको हौ । राम्रा गाडी किन्ने, राम्रा होटलमा वस्ने, विदेश भ्रमणमा निस्कने, जनतालाई अनावश्यक कर लगाउने गर्न हामीलाई निर्दोष जनताले पठाएका होइनन् । यो अत्यन्तै दुखद कुरो हो । म यसको घोर विरोधी हुँ । कर तिर्न सक्ने माथी लगाउनुपर्छ, सामाान्य जिवीका गर्ने मानिसमा कर थोपर्नु दुःखद कुरा हो । यो र यस्ता कार्य गर्ने यस्तो दुरासय वोकेका मान्छे वास्तवमा प्रतिनिधी वनेर आउनै हुँदैन ।
◊ अनावश्यक कर लगाउन हुदैन त भन्नुभयो तर कर त नागरिक माथि तपाइहरुले पनि लगाउनु भएकै छ त ।
हामीले वानी मात्र पार्ने गरी एकदमै थोरै र निश्चित वर्गका मान्छेलाई मात्र कर लगाएका छौ । हामीले आधिकारिक रुपमा करको सुची अझै सर्वाजनिक गरेका छैनौ । हामी सकेसम्म अनावश्यक कर थोपर्ने पक्षमा छैनौं ।
◊ नगर प्रमुख ज्यु, अन्तमा आम नागरिक समक्ष पु¥याउनुपर्ने सन्देश केही छ कि ?
म मेरा नगरवासी सवैलाई आश्वत पार्न चाहन्छु कि, नगरवासी वुवा आमा जो अत्यन्तै दुःख पाएर वस्नु भएको छ । सेवा सुविधा अझै यहांहरुको घर दैलोमा पु¥याउन सकेका छैनौ । हाम्रो प्रयत्न यहाँहरुको जीवनस्तर उकास्ने नै हो । मेरो यही कार्यकालमा नै मैले गरेका वाचा र वोल म पुरा गर्छु । यहाँहरुको सहयोग र साथ चाहिन्छ । धैर्य रहनुस् मैले मलाई मतदान गरी मलाई निर्वाचीत गर्नु हुने मतदाता मात्र नभई सम्पूर्ण नगरवासी लाई निरास बन्न दिने छैन ।
१७ भाद्र २०७५, आईतवार १९:१६ मा प्रकाशित